राष्ट्रियसभामा पूर्वबाट काँग्रेसले खोल्यो खाता, हेर्नुहोस् ताजा अपडेट — Imandarmedia.com
राष्ट्रियसभामा पूर्वबाट काँग्रेसले खोल्यो खाता, हेर्नुहोस् ताजा अपडेट
राष्ट्रिय सभा चुनावमा नेपाली काँग्रेसले पूर्वमा पनि विजयको खाता खोलेको छ । प्रदेश नम्बर १ बाट महिलातर्फबाट काँग्रेस उम्मेदवार सरिता प्रसाई निर्विरोध निर्वाचित भएकी छन् ।
बुधबार उम्मेदवारी दर्तासँगै काग्रेस नेतृ प्रसाई निर्विरोध विजयी भएकी हुन् । निर्वाचन अायोगले अौपचारिक रुपमा १५ गतेमात्रै घोषणा गर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी ७ नम्बर प्रदेशबाट नेपाली काँग्रेसका दुई उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र तीनै पार्टीले खाता खोलेका छन् ।
प्रदेश नं. ७ बाट तीनै पार्टीले खाता खोलेका छन् । एमाले तीन, काँग्रेसले दुई र माओवादी केन्द्रका एक जना विजयी भएका छन् ।
वाम गठबन्धनको तर्फबाट चार र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट दुई गरी ६ जना निर्विरोध भएका हुन ।
बुधवार भएको उम्मेदवारी मनोनयनको क्रममा खुला र महिलातर्फ आवश्यक सदस्य संख्यामा मात्रै उम्मेदवारी परेपछि तीन महिला र खुला सदस्यहरु निर्विरोध हुने भएकोले उनीहरु निर्विरोध भएका हुन् ।
निर्विरोध हुनेहरुमा खुलातर्फ एमाले अछामका अध्यक्ष एवं पूर्व सभासद् शेरबहादुर कुँवर, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बद्रीप्रसाद पाण्डे र नेकपा माओवादी कैलाली जिल्ला इन्चार्ज हरिराम चौधरी ‘उत्सव’ रहेका छन् ।
यस्तै महिलातर्फ एमाले केन्द्रीय सहरी बिकास बिभाग सदस्य ईन्दु कडरिया, कैलाली जिल्ला कमिटी सदस्य कमला वली र नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार तथा पूर्व शिक्षिका तारादेवी भट्ट रहेका छन ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले घोषणा भने गरिसकेको छैन । तर, आवश्यक संख्यामा मात्रै उम्मेदवारी परेका कारण महिला र खुला सदस्यका लागि निर्वाचन नहुने भएको छ ।
प्रदेश नम्बर सातबाट निर्विरोध हुँदा पनि काँग्रेस दोस्रो स्थानमा रहेको छ । यस्तै अवस्था रहे राष्ट्रिय सभामा पनि काँग्रेस दोस्रो नै हुने देखिएको छ ।
राष्ट्रियसभामा प्रदेश ५ बाट नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरु कोमल वली र मीना बुढा तथा नेपाली कांग्रेसकी अनिता देवकोटाको मात्र उम्मेदवारी परेको निर्वाचन अधिकृत हेमन्त रावलले जानकारी दिए ।
उनीहरु निर्वाचित भएको वा नभएको औपचारिक घोषणा भने उम्मेदवारको नाममाथि दाबी विरोधको समय सकिएपछि माघ १५ गतेमात्रै हुने उनले बताए । मुख्य निर्वाचन अधिकृत हेमन्त रावलले यसको औपचारिक घोषणा माघ १५ गतेमात्रै हुने बताए ।
यो बीचमा कसैले उम्मेदवारी फिर्ता लिनसक्ने र कसैका विरूद्धमा दाबी विरोध पर्न सक्ने भएकाले निर्वाचन आयोगले १५ गते मात्रै त्यसको घोषणा गर्ने रावलको भनाई छ ।
पाँच नम्बर प्रदेशबाट ३ जना महिलाको कोटामा अरु कसैको उम्मेदवारी नपरेपछि तीनै जना महिला नेतृलाई बधाई दिन थालिएको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एउटा प्रदेशबाट ८ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । त्यसमध्ये महिला ३ जना हुनेछन् ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रदेश १: सातै स्थानको मतपरिणाम आयो, को-को भए विजयी ?
पाँच नम्बर प्रदेशको निर्वाचन कार्यालय दाङको घोराहीमा
ताजा अपडेट: पहिलो, दोस्रो र तेस्रो बन्ने पार्टीले कति-कति जिल्ला गरे कब्जा ? यस्तो छ परिणाम
पार्टीको हारपछि निराश काँग्रेसमा सिटौलामाथि अपजसको भारी